10 Maalgashiyada Waqtiga Gaaban ee Ugu Fiican - Goobta Hantida
Bogga ugu weyn 10 Maalgashiyada Waqtiga Gaaban ee Ugu Fiican
10 Maalgashiyada Waqtiga Gaaban ee Ugu Fiican
Isha sawirka: retirehacks.com
Dad badan ayaa ka warqaba in lahaanshaha hadafyada maaliyadeed ee muddada-dheer ay weyn tahay. Laakiin ka waran inaad la kulanto hadafyada maaliyadeed ee hadda jira adiga oo aan lacagtaada meel ku xidhnayn muddo aad u dheer? Kaas oo ah maalgelinta wakhtiga gaaban.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan maalgelin muddo gaaban ah oo leh wax yar ama aan lahayn wax khatar ah oo soo celin kara?
Maqaalkan, waxaan kaga wada hadli doonnaa maalgashiyada muddada-gaaban ee ugu wanaagsan oo aad la geli karto soo-celin wanaagsan.
Waa maxay Maalgelinta Muddada Gaaban?
Maalgashiga muddada-gaaban waa nooc ka mid ah maal-gashiga oo aan loogu talagalin inuu noqdo mid waqti-dheer ah oo aad si fudud ugu beddeli karto lacag caddaan ah.
Waa hal maalgashi oo aad hayn karto nus sano ama hal sano oo buuxa. Waxa kale oo jira ikhtiyaarro maal-gashi oo muddo-gaaban ah oo booskiisa aan la hayn karin in ka badan hal maalin mararka qaarkood. Mid ka mid ahi waa ka ganacsiga sarifka lacagaha qalaad.
Waxaad aakhirka u beddeli kartaa maalgashi maalgashi muddo -gaaban ah haddii aad awooddo inaad ku iibiso muddo gaaban gudaheed.
Haddii aad tahay maalgaliye saamiyada oo aad rabto inaad sare u qaaddo maalgashiga muddada-gaaban, markaa uma baahnid inaad haysato muddo aad u dheer.
Maalgashadayaashu waxay kaydiyaan lacag si ku -meelgaar ah iyagoo adeegsanaya ereygan iyagoo sugaya inay u wareejiyaan maalgashi kale oo leh soo -celin sare.
Tusaalooyinka maalgashiga muddada-gaaban waxaa ka mid ah Suuqa Lacagta, CD-yada, Dowladda, Biilasha Maaliyadda, iwm.
Sidee Maalgelinta Muddada Gaaban U Shaqaysaa
Hadafka maal -gashade kasta waa inuu abuuro soo -celin iyo sidoo kale inuu ilaaliyo caasimaddooda.
Si shirkaddu u kala saarto maalgashiga maalgashi muddo gaaban ah, laba (2) shuruudood ayaa loo baahan yahay.
Waa inay dareere tahay. Sida saamiyada ka ganacsada inta badan ku qoran sarifka lacagaha qalaad.
Maamulku waa inuu amniga ku iibiyaa muddo gaaban gudaheed sida 12 bilood gudahood. Damaanad -qaadyada suuq -geynta ah ee ku bislaada sannad gudihiisa sida waraaqaha ganacsiga, Biilasha Khasnadda Mareykanka waxaa loo yaqaan maal -gashiga muddada -gaaban.
Damaanadaha deynta lagu iibin karo waxaa kale oo ku jira curaarta shirkadaha (curaarta ay soo saartay shirkad kale). Waa in la ganacsadaa oo loo tixgeliyaa dareere sidoo kale waxay leedahay waqti qaan -gaar ah oo gaaban.
10 Maalgashiga Waqtiga Gaaban ee Ugu Fiican
Hoos waxaa ah 10 -ka maalgashi ee muddada -gaaban ee ugu wanaagsan oo leh halis hoose iyo soo -celin sare
# 1. Xisaabta Kaydka
Koontada keydintu waa mid ka mid ah maalgashiyada ugu gaaban ee ugu wanaagsan. Markaad lacagtaada ku kaydiso bangigaaga, waxaad deyn siineysaa bangiga. Sidaa darteed, waxaad ku kasbataa dulsaar koontadaada.
Haddii aad diyaar u tahay inaad lacagtaada ka tagto 1-5 sano, waxaad ku urursan doontaa lacag aad u badan kaydkaaga.
#2. Curaarta dawladda
Tani waa sida dammaanadda shirkadda. Laguma soo saarin shirkadda laakiin waxaa iska leh Dowladda.
Curaarta dawladda ee ay soo saartay Maaliyadda Mareykanka ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dammaanadaha ugu nabdoon adduunka iyo mid ka mid ah maalgelinta ugu gaaban ee ugu wanaagsan.
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah maalgashiyada khatarta yar leh, sababtaas awgeedna, waxay bixiyaan dulsaar hooseeya.
Waxaad ku maalgelin kartaa curaarta Dowladda maadaama ay waxtar u leedahay maalgelinta barnaamijyada qaarkood sida jardiinooyinka, mashaariicda kaabayaasha, iyo adeegyada kale ee dadweynaha.
Sidoo kale, waa mid ka mid ah maalgashiyada ugu gaaban ee ugu wanaagsan
#3. Curaarta Shirkadaha
Kani waa nooc ka mid ah amniga oo laga iibiyo maalgashadayaasha, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah maalgashiyada ugu gaaban ee ugu wanaagsan.
Waxay la mid tahay deyn. Shirkadu waxay dib u bixisaa maalgeliyihii inta la bixiyay. Waxaana jira taariikh qaan -gaadhnimo iyo dulsaar.
Curaarta shirkaduhu way ka ammaan badan yihiin kaydka. Dammaanadda shirkadda, maalgeliyuhu wuxuu lacagtiisa ku soo ceshadaa dulsaar, laakiin saamigu waa ka khatar badan yahay sababta oo ah lacagtu qiimo uma korodho.
Hantida shirkaduhu waa saamiga shirkadda, taas oo siisa maal -galiyaha xoogaa lahaansho ah. Saami -qaybsiga waxaa la siiyaa maal -hayaha saamiyada. Oo qiimuhu wuxuu qiimeeyaa ama hoos u dhigayaa qiimaha taas oo ku xidhan guusha shirkadda.
#4. Hantidhowrka Maaliyadda
Waxaa jira laba nooc oo ah kaydka khasnadda oo ammaan ah. T-biilasha iyo T-note.
T-biilasha waxay leeyihiin shuruudaha qaangaarnimada ugu gaaban oo u dhexeeya 4 toddobaad, 8 toddobaad, iwm.
T-note-ku wuxuu bixiyaa dulsaar sanadkiiba hal mar iyo mudada qaangaarnimadooda waxay u dhexeysaa 2 ilaa 10 sano. Labaduba waa dammaanad-qaadyada ugu wanaagsan maalgashiga muddada-gaaban.
#5. Suuqa Lacagta
Suuqa lacagtani waa koonto u dhexaysa koontada jeegga iyo koontada kaydka.
Si aad ugu raaxaysato dabacsanaanta koontada jeegga oo leh dulsaar sare xisaabta kaydka dhalidda sare, ka dibna furitaanka suuqa lacagta ayaa sameeya.
Lacag xisaabta suuqa wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho kaarka deynta oo aad jeeg ku qorto. Waxay kugu xaddideysaa lix ka -bixitaan bishiiba iyadoo la raacayo xaddidaadaha Dowladda.
Bangiyada iyo ururada deymaha ayaa bixiya koontada suuqa lacagta. Koontada suuqa lacagtu waxay leedahay shuruudo adag marka loo eego koontada kaydka, sida koontada kaydka ee dhalidda badan.
Waxaa sidoo kale loo arkaa mid ka mid ah maalgashiyada ugu wanaagsan ee muddada gaaban.
#6. Shahaadada Debaajiga
Kani waa koonto aad ku keydiso lacag aad u tiro badan, oo aadan ku dhicin muddo cayiman.
Waxaad u kasbataa dulsaar laakiin waxaa lagaa qaadi doonaa ciqaab ka bixitaan hore.
Tani waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad kaydinayso muddo dheer.
Heerarka CD ee ugu fiican ayaa ka fiican suuqa lacagta ama koontada kaydka.
Shuruudaha CD -gu way kala duwan yihiin inta u dhaxaysa 6 ilaa 18 bilood. Inta badan shuruudaha CD -ga waxay ku dhacaan muddada maalgashiga muddada gaaban.
Waxay noqon kartaa hab aad lacagtaada ugu shaqayso muddo aad edbin lahayd.
#7. Amaahda Dacawada
Halkan, dhexdhexaadiye kuma lug laha maadaama ay tahay halka uu shaqsigu deyn ka qaato mid kale. Waxaa kale oo loogu yeeraa amaahda bulshada waxayna jirtay ilaa 2005.
Waxaa jira goobo fududeeya tan. Waxaad koonto ka furaysaa goobta oo waxaad dhigtaa xoogaa lacag ah oo loo isticmaali doono deyn ahaan.
Waxay kula midoobi doonaan codsadayaasha amaahda ee sameeyay koontooyinkooda. Khatarta ayaa sidoo kale ku lug leh, markaa waa inaad si taxaddar leh u doorataa codsadayaashaada.
Waxaa jira dulsaar aad u sarreeya laakiin maalgashiga muddada -gaaban, waxaad ku siin kartaa amaahda qaangaadhka ah 5 sano kadib.
#8. Koontada Maaraynta Lacagta
Koontada noocan ah waxaa bixiya shirkadaha dillaaliinta ah. Xisaabaadka badankoodu waxay la mid yihiin hubinta xisaabaadka la socda buugga jeegga iyo kaarka deynta.
Koontadani way fiican tahay haddii aad tahay maalgaliye oo aad leedahay koonto leh shirkado dillaaliin ah. Xisaabaadka maareynta lacagta caddaanka ah waxay leeyihiin adeegyo kaa caawiya kordhinta faa'iidadaada maalgashiga.
#9. Roth IRA:
Waa nooc koonto ah oo haya lacagaha hawlgabka. Waxaa loo yaqaan Koontada Hawlgabka Shakhsi ahaaneed (IRA)
Waxay ka soo horjeedaa IRA dhaqameedka.
Iyada oo la adeegsanayo Roth IRA, ka-noqoshadaadu waa canshuur-la'aan, laakiin waxaad canshuur ka bixisaa tabarucaadkaaga.
Ma bixiso dulsaar, laakiin markaad ku furto shirkad dilaal, waxaad kasbataa dulsaar isku dhafan.
Iyadoo la ilaalinayo Roth Koontada IRA shirkad dilaal, waxaad ku kordhineysaa dakhligaaga maalgelin gaaban.
In kasta oo ay tahay maalgashi muddo dheer ah
#10. Koontada hubinta abaalmarinta
Qaar ka mid ah xisaabaadka hubinta abaalmarinta waxaa ka mid ah:
Xisaabaadka Hubinta Xiisaha Leh:
Waxay bixiyaan dulsaar sare laakiin waxay u baahan yihiin dheelitir ugu yar.
Waxay bixiyaan adeegyo waaweyn sida talo dhaqaale iyo dhimis. Qaar ka mid ah qiima dhimistooda ayaa kaa caawineysa inaad xoogaa lacag ah keydiso. Waxa kale oo ay bixiyaan shuruudaha dheelitirka ee ugu sarreeya.
Maalgashiga muddada-gaaban waa mid faa'iido leh waxayna dhaliyaan dulsaar 5 sano gudahood. Waxay kaa caawineysaa inay ku siiso socod lacag caddaan ah oo joogto ah. Kahor intaadan ku mashquulin maalgashiyada waqtiga-gaaban, ka digtoonow halista oo waliba muuji yoolalkaaga maalgashi.
Maxaan ka fiirsadaa ka hor intaanan maalgelin?
Ka hor intaadan maalgelin, waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso
Kaararka Maaliyadeed ee Wanaagsan
10 Barnaamijyada Maalgelinta ugu Fiican ee Bilowga ah 2021 -ka
Sida Loogu Iibsado Beeraha Beeraha Maalgashiga Sanadka 2021 | Hagaha Khabiirka
Faallooyinka Acretrader 2021: Maalgashiga Beeraha ugu Fiican Ama Fadeexad?
Maxaan Ku Sameeyaa Lacagtayda? 10 Fursado Maalgashi oo Cusub sanadka 2021
W2 vs W4: Maxay ku kala duwan yihiin?
Goorma ayay tahay waqtiga ugu fiican ee la iibsado Furaash?
Sida Loo Iibsado Saamiyada Tesla 2021 | Talaabada Hagaha Talaabada
Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA), oo hore loo yiqiin Tesla Motors, Inc., waa shirkad Maraykan ah oo ku takhasustay…
Shakhsiyaad badan ayaa laga yaabaa inay ku xayiran yihiin laba daran mid dooro inay go'aansadaan madal maalgashi oo ay…
Intee in le'eg ayay mudan tahay dammaanadda Kaydka $ 100? Qiimaynta Ugu Fiican
Ma lahaan doontid fikradda ugu yar sida dhakhsaha leh ee maalgashiga dammaanadda kaydkaagu u korayo haddii aad sameyso…
Kuma filna inaad rabto inaad wax maal gashato, waxaad go'aansato inaad maal gashato waa inay ahaataa sida…
Sida Loo Maalgeliyo Dahabka 2022 | Waxyaabo Hubaal ah Waa inaad Ogaataa
Dahabku waa macdan qaali ah oo leh qiime sare. Waqti ka hor, dahabku wuxuu ahaa nooc is -weydaarsi dhab ah…